နမော ဗုဒ္ဓါယ သိဒ္ဓံ: 2010
Posted by kaungmon at 10:50 AM0comments
ဟိုတစ်နေ့က မြို့ထဲက အိပ်တစ်အိမ်ကို ပရိတ်ရွတ်လိုက်သွားတယ်။ အကြောင်းက အိမ်ရှင် မိသားစု ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဖူးကအပြန် ပရိတ်တရားနာချင်လို့ဆိုပဲ။ အိမ်ရှင်ဒကာက အိမ်ပေါက်က ထွက်ကြိုပြီး အိမ်ထဲကို ပင့်တယ်။ အိမ်ထဲ ၀င်ဝင်ချင်း စိတ်ထဲမှာ အတော်လေး ခံစား လိုက်ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အိမ်ဟာ လူနေအိမ်နှင့်မတူဘဲ ဘုရားကျောင်း အပြင် အဆင်နှင့် တူနေလို့ပဲ။ ကြည့်ပါ။ ဧည့်ခံမှာ ဘုရားစင်ကို မုခ်ဦးနှင့်တကွ ခန်းပြည့် လုပ်ထား တယ်။ ဆင်းတုတော်ရဲ့ ရှေ့မှာ သောက်တော်ရေချမ်း၊ ပန်း၊ အမွှေး၊ ဖယောင်း၊ သစ်သီးပွဲ တွေကို စနစ်တကျ လှလှပပ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းထားတယ်။ အခြား ပုတီး။ ခြင်္သေ့ သစ်ကျား၊ ဆင်စတဲ့ အရုပ်တွေကိုလည်း ဘုရားစင်မှာ ကျကျနန စီရရီ မျက်စိပသာဒဖြစ်အောင် ခင်းကျင်း ထားတယ်။ ဘုရားစင်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒီမိသားစုရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စိတ်ဓာတ်ကို ခန့်မှန်း လို့ ရနေပြီ။ အိန္ဒိယမှာက ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဆိုရပေမဲ့ အများစုက ဘုရားစင်မရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေဖြစ်ကြတယ်။ ရှိပေမဲ့ ပန်း၊ ရေချမ်း၊ သစ်သီး ဆက်ကပ်လှူဒါန်းရကောင်းမှန်း မသိကြဘူး။ ဆွမ်းကပ်ဘို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပေါ့။ သူတို့ အလေးထားတာက သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးခေါင်း ဆောင် ဒေါက်တာ အမ်ဘေဒကာပဲဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာက ဒေါက်တာ အန်ဘေဒကာဟာ ခေတ်သစ် ဗုဒ္ဓပဲ။
စကားစမြည်ပြောဆိုပြီး ပရိတ်ရွတ် အစီအစဉ်စတယ်။ ပထမ ငါးပါးသီလပေး။ ပရိတ်ရွတ်။ ပရိတ်ရွတ်တော့ မြန်မာအသံနှင့် ရွတ်ပြလိုက်တယ်။ ဘန္တေသုဒဿနကတော့ ကုလားသံနဲ့ပေါ့။ ပရိတ်ရွတ်ပြီး တရားစကားအနည်းငယ်ပြောခိုင်းလို့ အိမ်ရဲ့အနေအထားကို ထည့်ပြော ဖြစ်တယ်။
''ဒီအိမ်ဟာ လူနေအိမ်နဲ့ မတူဘူး။ ဘုရားကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ တူနေတယ်။ ဘုရားစင်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒီအိမ်က လူတွေရဲ့ ဗုဒ္ဓအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ခန့်မှန်းလို့ ရတယ်။ ဗုဒ္ဓကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်၊ လေးစားတယ်ဆိုတာကို ဘုရားစင်က ပြောနေတာပဲ။
ဒီအလေ့အထဟာ မြန်မာနိုင်ငံက အလေ့အထနဲ့သွားတူနေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာ သာနိုင်ငံဖြစ်လေတော့ အိမ်တိုင်းမှာ ဘုရားစင်ရှိတယ်။ ပန်း ရေချမ်း ဆီမီး မပြတ်ပူဇော်ကြ တယ်။ အိမ်သစ်မဆောက်မီကတည်းက ဘုရားခန်းနေရာကို အလေးထား ကြိုတင် သတ်မှတ် ထားကြတယ်။ ဒီအိမ်ဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုဓာတ်ကို အရယူထားတာပဲ။ အမြဲတစေ ဗုဒ္ဓပုံ တော်ကို မြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ အသိဟာ အမြဲတစေ ကိန်းအောင်းနေမှာပဲ။ ဒါဟာ အချိန်တိုင်းမှာ တန်းဘိုးကြီးတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နေကြတာပဲ။ ဒီမိသားစုဟာ ဗုဒ္ဓနဲ့ အတူတကွ နေထိုင်နေတာပဲ။ ဗုဒ္ဓဟာ မိသားစုရဲ့ ဆရာပဲ၊ အစ်ကိုကြီးပဲ၊ မိတ် ဆွေကောင်းကြီးပဲ။ ''
ပရိတ်ရွတ်တုန်းက မြန်မာအသံနှင့် ရွတ်ပြလိုက်တာ သူတို့ သိပ်သဘောကျသွားတဲ့ပုံပဲ။ မြန်မာဘန္တေတွေကို ပင့်ပြီး အိမ်မှာ ပရိတ်ရွတ်ပွဲ လုပ်ချင် တယ်လို့ ပြောလာတယ်။ ဒီလတော့ မြန်မာဘန္တေတွေ ဗုဒ္ဓဂယာဘက် ဘုရားဖူးထွက် နေလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်လဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ် လို့ ပြောလိုက်တယ်။
နေ့ဆွမ်းကို စားပွဲကုလားထိုင်နှင့် ဆက်ကပ်တယ်။ ဒါလဲ တစ်မျိုးထူးနေတာပဲ။ ကုလားအိမ် အတော်များများ လိုက်စားဘူးတယ်။ ကျမ်းပြင်မှာ တန်းစီစားရတာချည်းပဲ။ ဒီအိမ်ကတော့ မြန်မာလို ဟန်ကျပန်ကျ စားပွဲခုံမြင့်နဲ့။
စားသောက်ပြီး သူတို့နေတဲ့ အိပ်ခန်းတွေကို လိုက်ပြတယ်။ တိုက်က အသစ်၊ ပစ္စည်းပစ္စယ တွေက အသစ်ဆိုတော့ လှချင်တိုင်း လှနေတာပေါ့။ အိပ်ခန်းတခါးမကို သေချာကြည့်မိတယ်။ မှန်ပန်းချီသွင်းထားတာပဲ။ ပုံက မြည်းလှည်းနှင့် လူနှစ်ယောက်။ ဘုရား အလောင်းတော် တောထွက်ခန်းဖြစ်နေတယ်။ အံ့စရာပါဘဲ။ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ အိပ်ခန်းတံခါးမှာ အလောင်း တော် တောထွက်ခန်းပုံ ထည့်ထားရတာလဲ။ ဒါလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ကူးပဲလို့ တွေးမိတယ်။ ဧည့်ခန်းကို ပြန်လာတော့ နံရံတွေမှာ လိုက်ကာကပ်ထားသလို ပန်းချီဆေးချယ်ထားတယ်။ ဘန္တေသုဒဿန က ဒါဟာ မဏ္ဍပ သဘောပေါ့ လို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်လိုက်လေ။ ဘုရားစင် ရှိတဲ့ ဧည့်ခန်းကို မဏ္ဍပ်ပုံစံမျိုးပေါ်အောင် လုပ်ထားတာပဲ။ ဧည့်ခန်းက ၂ခန်း။ ဘုရားခန်းရဲ့ တစ်ဖက်က အခန်းမှာ စက်ဝိုင်းပုံ၊ ခရုသင်း စတဲ့ပုံတွေနဲ့ အထက်နံရံမှာ ချယ်သ ထားတယ်။ ဒါတွေဟာ တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာ မင်္ဂလာပုံတွေပေါ့ လို့ ဘန္တေသုဒဿန က ပြောပြန်တယ်။ အင်း ကောင်းတာပေါ့။ ထမင်း စားပွဲခုံရှည်ကြီးနားက နံရံမှာတော့ ကလေး များနဲ့ တရုပ်သူဋ္ဌေးကြီး ဦးတည်ပွားပုံ ဖန်ပန်းချီကားကြီး။ ဒါဟာ laughing Buddha ပဲလို့ ဘန္တေ သုဒဿန ပြောပြန်တယ်။ အင်း ငါသိ တယ်။ မြန်မာတွေက ဦးတည်ပွားလို့ခေါ်တယ်။ သူက happy Buddha ပေါ့လို့ ပြောလိုက်တယ်။
အိမ်ကို သိပ်သဘောကျသွားတယ်။ စိတ်ကူးအားလုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထား တာပဲ။ အိမ်ရှင် ဒကာကြီးကို မေးကြည့်တယ်။
'' ဒီလိုအနေအထားမျိုးကို ဘယ်ကနေ ပုံတူယူထားတာလဲ ''
'' ဘယ်ကမှ ပုံတူမကူးပါဘူး၊ စိတ်ကူးထဲမှာ ပေါ်တဲ့အတိုင်း လုပ်ထားတာပါ။''
'' နို့ ဒကာရဲ့ ဧည့်သည်တွေ လာတဲ့အခါ သူတို့အနေနဲ့ အနှောက်အယှက်ကော မဖြစ်နိုင် ဘူးလား။''
''မဖြစ်ပါဘူး၊ ဖြစ်ရင်လည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါက ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီး နိုင်တာပဲ ဥစ္စာ။ ''
'' ဒကာတို့က အိမ်တစ်ခုလုံးကို ဘုရားသီတင်းသုံးဘို့ လှူထားတာပေါ့လေ'' လို့ပြောတော့ ဒကာကြီးက ပြုံးနေတယ်။ ဘန္တေ သုဒဿနက '' of course ! '' '' ဘာလို့ မဟုတ်ရမှာလဲ '' ဟု ၀င်ပြောလိုက်တယ်။
အိမ်ကအပြန် အမည်မသိ ခံစားချက်တစ်ခု ရင်တွင်းမှာ ငြိကပ်ပါလာတယ်။ ကုလားတိုင်း ကုလားလို မဟုတ်ပါလား။
Posted by kaungmon at 2:41 AM0comments
Third semester စာမေးပွဲ ပြီးသွားပြီ။ ကျောင်းအားရက်မှာ ဗုဒ္ဓဂယာ မြန်မာ ကျောင်းသား စည်းဝေးပွဲ သွားဘို့ စာရင်းပေးထားတယ်။ ခက်တာက ဒီလ ၁၉ နဲ့ ၂၄ ရက်ကြား ဘယ်မှ မသွားဘို့ ပါဠိဌာနမှူးက ပြောလာတယ်။ ဒေလီက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွေ လာတဲ့အခါ ကိုယ်စားပြု ဖြေကြားသူအဖြစ် မိမိကို အမည်စာရင်း တင်ထားလို့တဲ့။ ဒီနှစ် ဂယာ ကျောင်း သား စည်းဝေးရက်က ၂၄။ ၂၅။ ၂၆ ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မမီနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဂယာကို မလိုက်နိုင် တော့တဲ့ အကြောင်း ပြောလိုက်ရတယ်။
ဘာလုပ်ရမလဲ။ ပါဠိဌာနမှာ ဒီလ ၁၇ ရက်နေ့က စပြီး တစ်ပတ်ကြာ အဘိဓမ္မာ သင်တန်းရှိတယ်။ သင်တန်းဆရာက ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ် ဗုဒ္ဓဇင်ဌာန ပါမောက္ခ မလေးနိုင်ငံသား အရှင်ဓမ္မဇောတိဖြစ်တယ်။ ပို့ချမည့် ဘာသာရပ်က သဗ္ဗသတိဝါဒ အဘိဓမ္မာဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့။ အဲဒီသင်တန်းကို တက်ရ မယ်။ သူတို့ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း မစခင် ကိုယ့်အဘိဓမ္မာသင်တန်း စထားမှဟု အတွေးရပြီး လာမည့် ၈ ရက်နေ့မှာ အဘိဓမ္မာ သင်တန်းပြန်လည်စတင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ ဘန္တေ သုဒဿနကို ပြောရတယ်။ သူက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာအသင်းရဲ့ လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ မဟုတ်လား။
သင်တန်းချိန်။ နံက် ၉- နာရီမှ ၁၀-နာရီ။
သင်တန်းဌာန။ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ။ ပူနေးတက္ကသိုလ်အတွင်း။ ပူနေးမြို့။
ယခုအချိန် စာမေးပွဲတွေပြီးလို့ ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းသားအများစု ခရီးထွက်နေချိန်လည်း ဖြစ်တယ်။ သင်တန်းကို ပုံမှန် လာနိုင်မယ့် အရှင် ဒီပါနန္ဒ (ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်) ဒေလီဘက်ကို ခရီးထွက်နေတယ်။ မစ်ယောင်လည်း ကိုရီးယားကို ခေတ္တပြန်သွားတယ်။ ဂျပန်မ ယူမီ၂ ယောက် အနက် တစ်ယောက်က သူမ စာတမ်းပြီးလို့် ဂျပန်ကို အပြီးပြန်သွားလေရဲ့။ တစ်ယောက်ကလည်း သူ့(PhD) စာတမ်း အပြီးသတ်ချိန်မို့ မအားမလပ်ဖြစ်နေ လေရဲ့။ ဂျာမန်မ ဒေါတယ်။ သူမက နောက်လ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးသွားဘို့ ပြင်ဆင်နေလို့တဲ့။ နီလမ ဆိုတဲ့ ကုလားကျောင်းသားကလည်း စာမေးပွဲ မပြီး သေးလို့ ခေါင်းမဖော်နိုင်သေး။ ပီအိပ်ဒီကျောင်းသူ ကုလားမလေး အမိနာ ကလည်း ဆရာဖြစ်စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေရတာနဲ့ အလုပ်များနေသတဲ့။ ဆရာ မစ်စတာ ဆန်ဂျေး တစ်ယောက်တော့ အားအား လပ်လပ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်နေ တာက သူ့ခမျာလည်း အစာအိမ် ကင်ဆာရောဂါနဲ့ အိမ်မှာ ဆေးစား ဆေးသောက်ရင်း အေးအေး လူလူ အနားယူနေချိန်ဖြစ်နေတယ်။ သင် တန်းလာခဲ့ဘို့ ခေါ်ရမှာလဲ အားနာစရာ။ ဒါပေမဲ့ ခေါ်ကြည့်တော့ လာရှာပါတယ်။ အဲဒီတော့ သင်တန်းမှာ ဆရာဆန်ဂျေး၊ ဘန္တေ သုဒဿန နဲ့ ကုလား ကျောင်းသားလေး မင်္ဂေ့ရှ် တို့ သုံး ယောက်ပဲရှိတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ လကျော် ၅လ ကြာ သင်တန်းက အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အတော်လေး ထိထိရောက်ရောက်ရှိလှပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းကို အခြေ ခံပြီး သင်္ဂြိုဟ် တစ်ကျမ်း လုံးကို မွှေနှောက်သင်လိုက်တာ လူတွေလည်း မူးနောက် သွားကြတော့တာဘဲ။ အိမ်မက် မက်သလို ကောင်းမှန်းတော့ သိတယ်။ ဘာမှတော့ မမှတ်မိလိုက်ဘူး ဆိုတာလို နေမှာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်နေနေ အဘိဓမ္မာ အရသာ သူတို့လေးတွေ သိသွားကြတာ အမြတ်ပဲ လေ။ ဒါကြောင့် နေရာတကာမှာ အဘိ ဓမ္မာကကို နှုတ်က မချကြဘူး။ ကိုရီးယားမလေး ယောင်ဆိုရင် '' ငါ နားတော့ မလည်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘာသာရပ်က သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာပဲ။ ကိုရီး ယားလို ပြန်ဆိုထားတာရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ '' လို့ ပြောရှာတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရှင်ဒီပါနန္ဒဆိုရင် '' အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကို ခုမှပဲသိခွင့် ရတယ်။ တို့နိုင်ငံမှာ အဘိဓမ္မာကို သင်တာ မရှိသလောက်ဘဲ။ ဘင်္ဂလား ဘာသာရပ်နဲ့ ပြန်ဆို နိုင်တဲ့အထိ ကြိုးစားမယ်'' လို့ ပြောရှာတယ်။ ကုလားမလေး အမိနာက တော့ ''သိပ်တော့ နားအလည်ကြီး မဟုတ်ပေမယ့် သိပ်စိတ်ဝင်စားတာပဲ။ စာတမ်း ရေးနေတာမို့ သိပ်မအား လပ်ပေမယ့် တစ်နေ့ တစ်နာရီတော့ အဘိဓမ္မာ သင်တန်းအတွက် အချိန်ပေးနိုင် ပါတယ်'' လို့ ပြောရှာတယ်။ ယခုသင်တန်းပြန်စတော့ အစက ပြန်ပြီး ကောက်ရတာပေါ့။ အဘိဓမ္မာ ဆိုတာဘာလဲ။ ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲ။ စိတ်ဆိုတာ၊ စေတသိက်ဆိုတာ၊ ရုပ်ဆိုတာ၊ နိဗ္ဗာန်ဆို တာ၊ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဆိုတာ စသည်စသည် ဖြေရှင်းချက်များနဲ့ပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်တန်းမှာတုန်းက လူကလည်းများ။ သူတို့ခမျာ အတွေ့အကြုံ သစ်လည်း ဖြစ်ကြပြန် ဆိုတော့ မယုံကြည်မှုတွေ၊ နားမလည်မှုတွေနဲ့ ငြင်းခုန် ဆွေးနွေး လိုက်ကြတာ ဆူညံပွက်လော ရိုက်နေတော့တာပဲ။ အဘိဓမ္မာကို နေ့စဉ် ဘ၀ထဲ ချပြတာကို သိပ်သဘော တွေ့ကြတယ်။ မြန်မာ့ လူမှုအသိုင်း အ၀န်းမှာ အဘိဓမ္မာသဘော တရားတွေ ဘယ်လောက် ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်နေတယ်ဆို တာ သိစေချင်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံထားတဲ့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်၊ မြန်မာ လူမျိုးတွေ တွေးကြံ ပြုမူနေထိုင်ကြပုံတွေကို မကြာမကြာပြောပြဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို အများစုက သဘောကျပေမဲ့ ဂျပန်မ ၂ယောက်က သဘော မတွေ့ကြ ဘူး။ တစ်ယောက်က ကွယ်ရာမှာ '' ဘန္တေ ကုသလ က တစ်ခါ လာလည်း မြန်မာ၊ တစ်ခါလာလည်း မြန်မာ။ သူ့မြန်မာတွေကိုပဲ အမွှမ်းတင်ပြောနေတော့ တာပဲ။ ဒါဆို သူ့အဘိဓမ္မာသင်တန်းက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း ကြီးဖြစ်နေ တော့တာပေါ့။ ဒါဟာ တို့ကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်လိုက်ဘို့ ပြောနေတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ'' လို့ အသံလွှင့်တယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ '' တို့က အားလုံးကို အညီ အမျှဖြစ်စေချင်တယ်။ နိုင်ငံအားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံးဟာ သူ့ယဉ် ကျေးမှုနဲ့သူ ရှိနေတာဘဲ။ မြန်မာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကွက်ပြောနေတာကို တို့မကြိုက်ဘူး၊ ညီညီမျှမျှပြောစေချင်တယ်'' လို့ သင်တန်း ချိန်မှာ ပြောလာတယ်။ ''ငါက မြန်မာဖြစ်တယ်။ မြန်မာ့အသိုင်း အ၀ိုင်းအ ကြောင်း ကို ငါသိတယ်။ မင်းတို့နိုင်ငံအကြောင်းကို ငါကောင်းကောင်း မသိဘူး၊ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ အကြောင်းကို ငါပြောခြင်းဖြစ်တယ်'' လို့ ပြောရတယ်။ ဒီဂျပန်တွေဟာ တစ်ခါတစ် လေ အတော်လေး ခွကျတယ်။ ဘာမှ မဟုတ်တာလေးနဲ့လည်း ရေးကြီးခွင် ကျယ် လုပ်တတ်ကြ တယ်။ သူတို့ ၂ယောက်အနက် တစ်ယောက်က ကလေးစိတ်။ သင်တန်းတွင်း ဆွေး နွေးငြင်းခုံ နေတုန်းမှာ စိတ်တိုင်းမကျရင် ထထပြန်သွားတတ်တယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မျက်လုံးနှင့်ကြည့်ရင် အတော်လေး ရိုင်းတဲ့ အပြုအမူဘဲ။ အခြားတစ် ယောက်ကဆို တစ်ခါ တစ်ခါ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ယူလာတတ်တယ်။ ကြည့်ပါ ''ဘုန်း တော်ကြီး ပညာရေးဆိုတာ ဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ လူဝတ်ကြောင်တွေနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ ဒကာ ဒကာမဆိုတာ ကျောင်းကို လှူရုံပဲသွားရတာ လို့ပြောကြတယ် ဟုတ်ပါ သလား'' ''သတိပဋ္ဌာန်သုတ္တန်မှာ လူမှု အသိုင်း အ၀ိုင်းနဲ့ ကင်းဝေးပြီး တောထဲကို တရားအားထုတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ အဲလိုဆိုရင် လူမူအသိုင်း အ၀ိုင်းကို ထောက်ပံ့ ကူညီနိုင်ဘို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့'' စတာ စတာကို အတတ်ကြီးလုပ် မေးလာတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမပြန်တော့ ''သူမကို အဘိဓမ္မာ သဘောတရားတွေ သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါကြောင်း '' ပြောသွား သေးတယ်။
အားလုံးဟာ ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလို့ ဗုဒ္ဓဘုရား မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ ယခု သင်တန်းပြန်စချိန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်တန်းအခြေအနေမျိုးနဲ့ မတူတဲ့ အခြေ အနေတွေကို တွေ့ရတယ်။ သင်တန်းသား အတော်နည်းသွားတယ်။ သင်တန်းမှာ သိသိသာသာကြီး တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ မေးခွန်းတွေသိပ် မလာကြတော့ဘူး။ ငြင်းခုန်မှုတွေ မရှိတော့ဘူး။ အဘိဓမ္မာသဘော တရားတွေရဲ့ အတိမ်အနက်ကို နားလည်သဘော ပေါက်သွားကြတဲ့ သဘောပဲ။ ဒါပေမယ့် ကုလားကျောင်း သားလေး မင်္ဂေ့ရ်ှကတော့ '' သိပ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လောဘဆိုတဲ့ အချစ်ကို ဘာ့ကြောင့် မကောင်း ဘူး(အကုသိုလ်) လို့ ပြောရတာလဲ '' လို့ မေးလာတယ်။
Posted by kaungmon at 11:33 PM0comments
Posted by kaungmon at 10:27 AM0comments
၃. ၁၁. ၂၀၁၀
ညနေ ၅ နာရီတွင် အိန္ဒိယ ကျောင်းသား လူငယ်တစ်ယောက် သုံးဘီးဖြင့် အဆောင်သို့ ရောက်လာသည်။ အရှင်စန္ဒာဝရ၊ မောင်တေဇနှင့် စာရေးသူတို့ သုံးဦး လိုက်ပါသွားကြသည်။ အဆောင်မှ မြို့ထဲရှိ ဖာကူဆန် ကောလိပ်။ ဖာကူဆန်ကောလိပ်မှ အခမ်းအနား ကျင်းပရာ ဖတန်မြို့သို့ သွားကြ မည်ဖြစ်သည်။ ဖာကူဆန် ကောလိပ်သည် လိုက်ပါကြမည့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ စုရပ်ဖြစ် သည်။ စုရပ်တွင် ကျောင်းသားအချို့ ရောက်နှင့်နေကြသည်။ စာရေးသူတို့ ရောက်လျှင် လာရောက် နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ဤခရီးစဉ်အတွက် နိုင်ငံတ ကာ ကျောင်းသားများ စည်းရုံး ရေးမှူးသည် အီရန်နိုင်ငံမှ လူငယ် ကျောင်းသား မစ္စတာ ဖန်နီးဖြစ်သည်။
သွားရောက်ကြမည့် ဖတန်မြို့သည် ပူနေးမြို့နှင့် ကီလိုမိတာ ၁၁၀ လောက်ဝေးသည် ဆတ်တရခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့ကလေးဖြစ်သည်။ ပြုလုပ်မည့် အခမ်းအနားမှာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော် ဖြစ်သည်။ ၄င်းအခမ်းအနားကို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူငယ်များက ဦးစီးကျင်း ပကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်သည် သုံးကြိမ် မြောက် ဆင်ယင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဤပွဲတော်ကို ဒေ၀ါလီပွဲတော် ကျောင်းပိတ်ရက်နှင့် တိုက်ဆိုင်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး လိုက်ပါကြ မည့်သူများ အတွက် သွားလာ နေထိုင်စရိတ်များကို တာဝန်ယူ၍ ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းအားရက်တွင် ခရီးတို သွားလိုသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် လိုက်ပါ သွားလာသင့်သော ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖာကူဆန်ကောလိပ်မှ ဖကန်သို့ ခရီးသည် ညနေ ၆ဒ၃၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့သည်။ စာရေးသူတို့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအဖွဲ့တွင် အီရန် ၈၊ အာဖဂန် ၄၊ နီပေါ ၁၊ မြန်မာ ၃၊ ဘူတန် ၂၊ မဏိပူရ် ၁၊ အာဖရိက ၄၊ တရိပူရ် ၁၊ အိန္ဒိယကျောင်းသားများအပါအ၀င် ကျောင်းသား ၃၀ ရှိမည်။ လမ်းတစ်လျှောက် အလှည့်ကျ စကားပြော၊ သီချင်းဆို၊ ကခုန် သွားကြသဖြင့် ပျော်စ ရာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ည ၁၁ နာရီတွင် ဖကန်မြို့သို့ ရောက်ရှိကြပြီး Jeet ဟော်တယ်တွင် ညစာစား ညအိပ် တည်းခိုကြသည်။
နံက် ၁၁ နာရီတွင် ဟော်တယ်မှ မြို့ထဲသို့ ထွက်လာကြသည်။ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရတွင် နံက်စာအဖြစ် ထမင်းကြော်သုံးဆောင်ကြသည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရမှ အခမ်းအနား ကျင်းပရာ မြို့တော် ခမ်းမဆီသို့ သာသနာ့အလံများ၊ ဆိုင်းဘုတ်များကိုင်ဆောင်၍ နှစ်ယောက်တစ်တွဲ စီတန်းလှည့် လည်သွားကြသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် '' ဒေါက်တာ ဘာဘာ အန်ဘေဒကာ'' '' ဂျိန်ဘင်း '' ။ '' ဗုဒ္ဓံ သရဏ'' '' ဂစ္ဆာမိ'' ၊ '' ဓမ္မံ သရဏံ'' '' ဂစ္ဆာမိ'' ဟူသော ကြွေးကျော်သံများကို အော်ဟစ် ကြွေးကြော်သွားကြသည်။
မြို့တော် ခမ်းမသို့ ရောက်လျှင် အားလုံးနေရာယူ၍ ဘုရားဆင်းတုတော်နှင့် ဒေါက်တာ အန်ဘေဒကာ ဓာတ်ပုံတို့အား ပန်းလှူခြင်း၊ ဆီမီး၊ အမွှေးတိုင်များ ထွန်းညှိ ပူဇော်ခြင်း၊ ငါးပါး သီလ ခံယူဆောက် တည်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ပြီး အခမ်းအနား စတင်ဖွင့်လှစ်သည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများအား ဒေါက်တာ အန်ဘေဒကာ ရေးသားသော the Buddha and His Dhamma အမည်ရှိ စာအုပ်နှင့် ပန်းများကို တစ်ဦးချင်းခေါ်ယူ၍ လက်ဆောင် ပေးသည်။
ထို့နောက် အီရန်နိုင်ငံမှ ကျောင်းသား မစ္စတာ ဖန်နီးတို့ မောင်နှစ်မနှစ်ယောက်၏ Cultur and religion တင်ဆက်ပြသမှု အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ Cultur and religion တို့၏ အဓိပ္ပါယ်၊ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာတရားများ၊ ကမ္ဘာ့ဘာ သာဝင် ဦးရေစာရင်းစသည်များကို ၁၀ မီနစ် အတွင်းမှာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တင်ပြသွားကြသည်။
အီရန်မောင်နှစ်မ၏ တင်ဆက်မှုပြီးလျှင် အိန္ဒိယ ကျောင်းသားများ၏ အလှည့်ကျ ဟောပြောမှု။ အင်္ဂုလိမာလ တေးသရုပ်ပြ ရုပ်ရှင်တင်ဆက်မှုတို့ကို ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက် မြန်မာ ရဟန်းတော် အရှင်စန္ဒာဝရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်း တင်ဆက်ပြ သမှုဖြစ်သည်။ ပရိုဂျက်တာတွင် ရွှေတိဂုမ်စေ တီတော်သည် ရွှေရောင်ဝင်းတောက် နေခြည် အောက်တွင် ငွားငွားစွင့်စွင့် ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာလျှင် ပရိသတ် အားလုံး မှာ ငြိမ်သက်သွားကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်များ၏ အငြိမ်းဓာတ်ကို အားလုံး ခံစားလိုက်ကြရသည်။ မူစလင် ဘာသာဝင်ဖြစ်ကြသည် အီရန်ကျောင်းသားများပင် ခေါင်းများ ထောင်၍ တအံ့တသြ ငေးမောကြည့်ရှုကြသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ပေါ်လာတော့ သူတို့ထံမှ စကားသံများ ထွက်လာကြသည်။ သူတို့ဘာသာဝင်တို့ ယုံကြည်သည့် ကျောက်တုံးနှင့်တူသည့် သဘောပင်လားမသိ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အပေါ်နှင့် အောက်လွတ်နေ သော ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်၏ ထူးဆန်းအံ့သြမှုကို ပရိသတ်အားလုံးပင် မင်သက်ရှိုက် မောသွားကြသည်။ အနီးနားတွင် ရှိသော အာဖဂန် ကျောင်းသား တစ်ယောက်အား စာရေးသူက လိုက်ပါရှင်းလင်းပြောပြသည်။ အာဖဂန်သည် ခေါင်းတညိတ် ညိတ်ဖြင့် ပရိုဂျက်တာတွင် ပြသမျှကို မလွတ်တမ်းကြည့်လိုက် စာရေးသူပြောသည်ကို နားစိုက် ထောင်လိုက်ဖြင့် အတော်လေး အလုပ်များသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အရှင်စန္ဒာဝရ၏ တင်ဆက်မှု ပြီးလျှင် အိန္ဒိယ ကျောင်းသူ လေး ၃ ယောက်၏ တေးသရုပ်ကပြ တင်ဆက်မှုဖြစ်သည်။
နေ့လည် ၄ နာရီတွင် အခမ်းအနား ခေတ္တရပ်နား၍ နေ့လည်စာ စားသောက်ကြသည်။ (ထမင်း၊ ပဲဟင်းရေကြဲ၊ အချိုတစ်ခဲ) အိန္ဒိယ အစားအစာကို မစားနိုင်ကြ၍ ကျောင်းသားအချို့ အပြင် ထွက်စားကြသည်။ နေ့လည်စာ စားပြီးလျှင် ညနေပိုင်း အခမ်းအနား အစီအစဉ်ကို စတင် ကျင်းပသည်။ အိန္ဒိယကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အလှည့်ကျ ဟောပြောမှုများ၊ အန်ဘေဒကာ၏ မိန့်ခွန်းဗွီဒီယိုပြသမှု၊ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ လာရောက်ပြီး အားပေးစကား ပြောဟောမှု၊ အိန္ဒိယကျောင်းသူလေး ၃ ဦး၏ ကပြဖျော်ဖြေမှု၊ တရိပူ၊ မဏိပူ၊ နီပေါ၊ ဘူတန်ကျောင်းသားများ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ညနေ ၅း ၃၀ နာရီအချိန်တွင် ညနေပိုင်း အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
Posted by kaungmon at 11:50 PM0comments
၂၂.၁၀-၂၀၁၀ နေ့ နံက် ၈ နာရီအချိန်တွင် ဘန္တေသုဂတ က ကားဖြင့် လာရောက်ပင့်ဆောင် သဖြင့် ပူနေးမြို့ အန်ဘေဒကာရပ်ကွက် မဟာဗောဓိကျောင်း သီတင်းကျွတ် မဟာပ၀ါရဏာ နှင့် ကထိနကံဆောင်ပွဲသို့ စာရေးသူနှင့်အတူ ဘန္တေသုဒဿန (ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ)၊ အရှင်ကုမာရ ကဿပ (သီရိလင်္ကာ) ၊ အရှင်ဓမ္မဒီပ (ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်) လိုက်ပါသွားကြသည်။
တက္ကသိုလ်အဆောင်နှင့် မဟာဗောဓိကျောင်းသည် နာရီဝက်၊ မိနစ် ၂၀ ခန့် ကားဖြင့် သွားရ သည်။ ကျောင်းသို့ ရောက်သောအခါ နံက်စာ ဆက်ကပ်ကြသည်။ နံက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် ကထိနကံဆောင်မင်္ဂလာ ဆင်ယင် ကျင်းပသည်။ ကထိန်ရာသီသည် သီတင်းကျွတ် လပြည့် ကျော် (၁) ရက်မှ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ တစ်လတာ ကာလဖြစ်သည်။ ယနေ့သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်သဖြင့် ကထိန်ကာလရောက် ဘို့(ကထိန်ခင်းနိုင်ဘို့) တစ်ရက်လို သေးသည်။ သို့သော် ၀ိနည်းတော်နှင့်အညီ ကထိန်ကို မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရ သည်ကို သိစေခြင်းငှာ ကထိန်းသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီးနောက် ကထိန်ကံဆောင်ခြင်းအမှုကိုပါ ဆက် လက်ပြုလုပ်သည်။
ကထိန်ကံဆောင်ခြင်းအမှုကို ရဟန်းငါးပါး အနည်းဆုံးရှိမှ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤကျောင်းတွင် ရဟန်းတော် ၃ ပါး သီတင်းသုံးသည်ဟုဆိုသည်၊ (သို့သော် အားလုံးသည် ရဟန်းမဟုတ်ဟု နောက်မှ သိရသည်)။ စာရေးသူတို့က လာရင်း (သီရိလင်္ကာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် စာရေးသူ) သုံးပါးနှင့်ဆိုလျှင် စုစုပေါင်း (၆) ပါးဖြစ်၍ ကထိန်ကံ ဆောင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကထိန်ကံ ဆောင်ခြင်းကို သိမ်အတွင်း၌သာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း သိမ်မရှိသော ဤနေရာ၌ ကျောင်းမြေကိုပင် သိမ်အဖြစ် နှလုံးသွင်း၍ ကံဆောင်မှု ပြုရသည်။ ကမ္မ၀ါစာ ရွတ်ဖတ်သော အခါ ကိုရင်များကို ကထိန်ကံဆောင်မည့် ရဟန်းများနှင့် နှစ်တောင့်ထွာ အကွာအဝေးသို့ ဖယ်ရှားစေ၏။ ဘန္တေသုဒဿနသည် (တိဘက်တန်လားမား(မဟာယာန) ရဟန်းဖြစ်သဖြင့် ၄င်းတို့၏ အနေ အားဖြင့် ရဟန်းဖြစ်သော်လည်း ထေရ၀ါဒ အနေအားဖြင့်) ကိုရင်ကြီးဖြစ်၍ ရဟန်းများနှင့် ဝေးရာသို့ နေပေးရန် ပြောရသည်။ ဘန္တေသုဒဿနသည် စိတ်သဘော ကောင်းသူဖြစ်၍ ဘာမှမပြောရှာဘဲ ရဟန်းများနှင့် (၂ တောင့်ထွာ) ဝေးရာအရပ်သို့ ရှောင်ရှား ပေးရှာသည်။
ခက်သည်ကား အိန္ဒိယရဟန်းတော်များသည် ရဟန်းမည်ကာမတ္တဖြစ်နေ၏။ စာပေ သင်ကြား ခြင်းမရှိကြ၍ ပိဋကတ်စာပေကို ကောင်းစွာ သိနားလည်ခြင်း မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် ရဟန်း တော်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ၀ိနည်းကံများကိုလည်း သိနားလည်ခြင်း မရှိကြပေ။
ကထိန်ခင်းမည်ဖြစ်၍ ကထိန်ခင်း ကမ္မ၀ါစာရှိမရှိ မေးကြည့်ရာ ကမ္မ၀ါစာ မရှိပါကြောင်း ပြော သဖြင့် မဟာဝါ ပါဠိတော် ကထိနက္ခန္ဓက၀ဂ်မှ ကထိန်ခင်း ကမ္မ၀ါစာကို ပရင့်ထုတ်ယူရသည်။ ကထိန်းသင်္ကန်းအလှူခံမည့် ဦးဇင်းကြီးအား ကထိန်ခင်းပုံ၊ အနုမောဒနာပြုပုံစသည်များကို တစ်ခုခြင်းစီ သင်ပြပေးပြီး ကံဆောင်ခြင်း အမှုပြုရ ၏။ ကထိနကံဆောင်အစီအစဉ်များ ပြုစဉ် အိန္ဒိယရဟန်းတစ်ပါးက '' ဒါတွေ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး'' ဟု ပြောသဖြင့် '' အရှင်ဘုရား လုပ်တတ်ပါ သလား'' ဟု ပြန်လည်မေးရသည်။ ကထိန်ကံဆောင်မှု ပြုပြီးသည့် နောက် ပ၀ါရဏာပြုကြ၏။
ယနေ့သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်သဖြင့် သံဃာတော်များ၏ မဟာပ၀ါရဏာနေ့ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ကထိနကံဆောင်ပြီးနောက် ဘုရားဆင်းတုတော်ရှေ့တွင် တန်းစီထိုင်၍ ပ၀ါရဏာပြုကြသည်။ ပ၀ါရဏာ ဆိုသည်မှာ အပြစ်များ မြင်ကြားသံသယဖြစ်ခဲ့သော် သနားသဖြင့် ဆိုဆုံးမမှုပြုပါရန်နှင့် ထိုအပြစ်များကို ကျေပျောက်အောင် ကုစားပါမည့်အကြောင်း ရဟန်းတော်များအချင်းချင်း ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ ရဟန်းတော်များ ပ၀ါရဏာ ပါဠိစာ မရသဖြင့် သီရိလင်္ကာ ရဟန်းတော်က ရှေ့မှ တိုင်ပေးရသည်။
ပ၀ါရဏာပြုပြီးနောက် ထို့နောက် သီရိလင်္ကာ ရဟန်းတော် အရှင်ကုမာရကဿပ ၏ အနုမောဒနာ တရား စကား ပြောကြားခြင်း၊ လှူဘွယ်ဒါန်းဘွယ်များကို လှူဒါန်းခြင်း၊ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သည်။
စာရေးသူ၏ အနုမောဒနာတရားပွဲကို နေ့ ၁ နာရီတွင် စတင်သည်။ စာရေးသူက အင်္ဂလိပ်လို ပြော၍ ဘန္တေမဟာနာဂ က မာရတီဘာသာပြန်ဆိုပေးသည်။
'' ဗုဒ္ဓဘာသာသည် သိပ္ပံပညာ၏ ထောက်ခံမှုကို ရသဖြင့် စစ်မှန်သော ဘာသာတရားဖြစ်ကြောင်း။ မြန်မာပြည်တွင် ရဟန်းတော် ၄ သိန်းကျော် သီတင်းသုံးနေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာတရား တော်များ မကွယ်မ ပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နေကြကြောင်း။ ကျောင်းကန် ဘုရား ပုထိုးများဖြင့် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အထွန်းကားဆုံးသော နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နေကြောင်း။ သာသနာတော် စည်ပင် ထွန်းလင်းရေး အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ကြမည့် ရဟန်းအဖွဲ့အစည်းသည် များစွာ အရေးကြီးပါကြောင်း။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ စတင်ခဲ့ရာ နေရာဖြစ်သော်လည်း ကံမကောင်းစွာပင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အိန္ဒိယ၌ နှစ်အနည်း ငယ်မျှသာ တည်ရှိခဲ့ပါကြောင်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိဥာဏ်များ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းသည်ပင် အိန္ဒိယ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပျောက်ရခြင်း၏ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ တည်တန့် ရေးအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိဥာဏ် ရရှိဘို့ များစွာ အရေးကြီး လှပါကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ပျောက်ဆုံး-ခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရမည်ဖြစ်-ကြောင်း။ ရဟန်းတော်များ၊ သာမဏေများက ဗုဒ္ဓစာပေများကို သင်ကြားချပို့၊ ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်၊ လူဒကာ ဒကာများက ရဟန်းတော်များ၊ သာမဏေများကို ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ထောက်ပံ့ခြင်း တာဝန်များကို (မြန်မာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံများကဲ့သို့) ပြန်လည် ကျင့်သုံးကြမှသာ အိန္ဒိယ၌ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ခိုင်မာစွာ ပြန်လည်ထွန်း လင်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း''
စသည် ပြောပြီး တရားဟောခြင်းကို အဆုံးသတ်သည်။
နာရီဝက်ခန့် အနုမောဒနာ တရားဟောပြီးနောက် သိလိုသမျှမေးရန် အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ် သည်။ တရားနာ ပရိသတ်ထဲမှ အမျိုးသမီး ၂ ဦးက သိလိုသည်များကို မေးမြန်းလာသည်။
ပထမအမျိုးသမီး။ ။''အိမ် (မိသားစု) တွင် မိမိတစ်ဦးသာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည် သူဖြစ်ပါကြောင်း။ အခြားသူများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ဝင်စားသူများ မဟုတ်ကြပါကြောင်း။ ထို့ကြောင့် တစ်ပါး သူများကို ဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ဝင်စားသူများဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုပြု လုပ်ရမည်ကို သိလို ပါကြောင်း'' ။
စာရေးသူ။ ။ ''တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ယုံကြည်မှု မတူတတ်သည်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ သဘောတရား တစ်ခုဖြစ် ပါကြောင်း။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် အဖေက ခရစ်ယန်၊ အမေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားစင်နှင့် ဂျီဇက်ပုံထားရာ နေရာ ၂ နေရာထားရပါကြောင်း။ သားသမီး များကလည်း ၂ ဘက်ခွဲသွားပါကြောင်း။ ဤအချက်မှာ ဗုဒ္ဓဘုရားဟောသည့် ဧကဂေဟေ နာနာဆန္ဒေ ဆိုတဲ့ တရားတော်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှု ရှိပါကြောင်း။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဘာမျှ မတတ်နိုင် သည့် အနေအထားမျိုးတွင် ရှိပါကြောင်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဘို့အတွက် အခြားသူများကို တွန်း အားပေး ဘို့ မလိုသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ သဘောတရားများကို ပြောပြ သင့်ပါကြောင်း။ အရေးကြီးသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘုရား ဟောထားသည့် အတ္တာ ဟိ အတ္တနော နာထော ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်ကိုသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဘို့ အလေးထား သင့်ပါကြောင်း။ အခြားသူဆိုသည်မှာ ဒုတိယအဆင့်တွင် ရှိပါကြောင်း။ ''
ဒုတိယ အမျိုးသမီး။ ။ ''အခြား ခရစ်ယာန်၊ မွတ်စလင်စသည့် ဘာသာများသည် ကျောင်း ဆောက်ပေးခြင်း။ ထောက်ပံငွေပေးခြင်း စသည်များကို ပြုလုပ်ပေးပြီး လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးကြပါကြောင်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အနေဖြင့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း စည်ပင်အောင် ဘယ်ကဏ္ဍက ပါဝင်ဆောင် ရွက်သည်ကို သိလိုပါသည်''
စာရေးသူ။ ။ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လည်း ယင်းကဲ့သို့ လူမှုရေး ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို အားပေး ပါကြောင်း။ ဂျပန်၊ တရုပ်၊ ကိုရီးယားစသည့် နိုင်ငံများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး လူမှုထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများကို ရှေ့တန်းက ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့မြင်နိုင် ပါကြောင်း။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ငြိမ်းချမ်းသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရေးအတွက် စိတ် ဓာတ်မြှင့် တင်ရေးကို အဓိက ဦးတည် ထားပါကြောင်း။
ပစ္စည်းဥစ္စာသည် လူဘောင်အဖွဲ့ အစည်းအတွက် လိုအပ်ပါကြောင်း။ သို့သော် ၄င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော စိတ်နှလုံး ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို မဖြစ်စေပါကြောင်း။ ယနေ့ ချမ်းသာသည့် အနောက်နိုင် ငံသားများသည် စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသည့် နည်းလမ်း(ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား) များကို ရှာဖွေ လိုက်စားလာပါကြောင်း။ မကြာမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်းနှင့် ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီ ပိုင်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားခြင်းသည် တကယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ပစ္စည်းဥစ္စာ မဟုတ်ဟု ပြောသလိုဖြစ်နေပါကြောင်း။ ဒါကြောင့် တကယ့်ငြိမ်းချမ်းမှု အစစ်အမှန်ကို ပေးနိုင်သည့်အရာသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်ပါကြောင်း။ ဗုဒ္ဓဘာ သာသည် ထိုကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းလမ်းပြ ဘာသာတရား တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း။ ''
အခမ်းအနားကို ညနေ ၂ နာရီအချိန်တွင် အဆုံးသတ်လိုက်ကြသည်။
Posted by kaungmon at 11:01 AM0comments
Posted by kaungmon at 10:02 AM0comments
Posted by kaungmon at 9:31 AM0comments
စစ်ကိုင်းရောက်တော့ စစ်ကိုင်းက ဆရာသမားများကို ကန်တော့ရပြန်သည်။ ပထမဦးစွာ ဇေယျာဝံသ ကျောင်းဆရာတော်ကို ကန်တော့သည်။ ဆရာတော်သည် စာရေးသူနှင့် ညီအစ်ကို တော်စပ်ပြီး စာရေးသူအား ငယ်စဉ်ဘ၀မှစ၍ အစစအရာရာ ပြုပြင်ထိန်းကျောင်းပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဆရာတော်က သြ၀ါဒပေး တော်မူသည်မှာ-
'' တို့များ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ပြည်ပပညာတော်သင် သွားတာကို သိပ်ပြီးတော့ သဘော တွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဖွဲဝင်ဆန်ထွက်ဖြစ်မှာစိုးရိမ် လို့တဲ့။ မင်းက ခေတ်အလိုက် ဟိုကို သွားရမှာ ဆိုတော့ ဟိုမှာ နေတဲ့အခါ ရဟန်းသညာ မပျောက်ဘို့ လိုတယ်။ ငါ ရဟန်းပါလားဆိုတဲ့ အသိစိတ် ရှိနေဘို့လိုတယ်။ ငါကတော့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဘာမှ မပေးလိုက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမင့် မင်းပြန်လာရင် အမေရိက သွားနိုင်အောင် အမေရိက က ငါ့ဒကာ ဒကာမတွေနဲ့ ဆက်သွယ် ပေးမယ်။ ဒါတော့ ငါလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ''
စာရေးသူ မျက်ရည်ဝဲရပြန်ပြီ။ ဆရာသမားတို့၏ စေတနာ မေတ္တာသည် နှိုင်းဆ၍ မရနိုင်အောင် ကြီးမားလှပါတကား။ တို့များ ဆရာတော်ကြီးဆိုသည်မှာ စာရေးသူ၏ အဘိုး တော်စပ်သူ ရွှေကျင်နိကာယ ဥပဥက္ကဋ္ဌ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု စစ်ကိုင်း ပထမဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးကို ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ၀ိနည်းတရား အလွန်လေးစားတော်မူပြီး ရှားမှရှားသော ရဟန်းကောင်း တစ်ပါးအဖြစ်ဖြင့် ဘ၀တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်သွားတော်မူခဲ့သည်။ မှတ်မိပါသေးသည်။ ငယ်စဉ်က ဆရာတော်ဘုရားကြီး ထံစာတက်စဉ်-
'' ငါက မင်းတို့ကို ငါ့ထက် တော်တတ်သူတွေဖြစ်စေချင်တာ။ နိုင်ငံတကာကို လှည့်လည်ပြီး သာသနာပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေအထိ ဖြစ်စေချင်တာ ''
-ဟု မကြာခဏ မိန့်ကြားတော်မူလေ့ရှိသည်ကို သတိရနေမိပါသေးသည်။ ယခု ပညာတော် သင် ခရီးသည် ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်စေချင်သော ပြည်ပ သာသနာပြု လုပ်ငန်း၏ အစခရီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုက မှားမည်မဟုတ်ပါ။ တပည့်၏ ပညာတော်သင်ခရီး ပြီးစီး အောင်မြင်အောင် မစချီးမြှောက်တော်မူပါ ဘုရား။
Posted by kaungmon at 7:33 AM0comments
အိန္ဒိယသို့ ပညာတော်သင်သွားမည့်အကြောင်း နီးစပ်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ပြောပြရင်း နှုတ်ဆက် စကားဆိုရသည်။ ထိုအခါ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ စကားများကို ပြော၍ ပြန်လည် နှုတ်ဆက် စကားဆိုကြသည်။ အိန္ဒိယသို့ ပညာတော် သင်သွားခြင်းကို လူငယ်အများစုက သဘော တွေ့ကြပြီး လူကြီးများကမူ သံဝေဂသံဖြင့် သတိပေးစကားနှင့် အားပေးစကားများကို ပြောကြသည
ဆရာသမားများကို ခရီးသွားခါနီး၌ ကန်တော့ပန်းဆင်ရသည်မှာ မြန်မာတို့၏ မွန်မြတ် အထက်တန်းကျလှသော ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကန်တော့သဖြင့် ဆရာသမား များထံမှ ဘ၀အတွက် အရေးပါသော သြ၀ါဒကထာများကို နာယူခွင့်ရသည်။ ဤ၌ စာရေးသူ အား စာရေးသူ၏ ဆရာသမားများက ပေးလိုက်သော အဆုံးအမများကို စုစည်း၍ မျှဝေလိုက်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ ရွာဦးကျောင်း ငယ်ဆရာတော်ကို ကန်တော့တော့ အောက်ပါအတိုင်း သြ၀ါဒပေး တော်မူသည်။
'' ကောင်းကောင်းနေ ဒါပဲ ပြောချင်တယ်။ ''
ဆရာတော်သည် သွာက္ချာပါဒ လေငန်းဖြတ်ထား၍ ကောင်းကောင်း စကားမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော် စကားကောင်းကိုမူ ကောင်းကောင်းပြောနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကောင်းကောင်း နေတဲ့။ မှန်လိုက်တဲ့စကား။ ပိဋကတ်သုံးပုံကို ချူပ်မိတဲ့စကား။ လောကကြီးထဲ၌ ကောင်း ကောင်းနေတတ်ဘို့ရာ အရေးကြီးသည်။ အများစုသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကောင်းကောင်း မနေတတ်ကြသဖြင့် ကြီးပွားသင့်သလောက် မကြီးပွားဘဲ ဖြစ်နေသည်။ အချို့ကောင်းကောင်း မနေကြသဖြင့် အတိဒုက္ခပင် ရောက်သွားကြသည်။ ကောင်းကောင်း နေဆိုသည်မှာ အပြော အဆို အနေအထိုင် အကြံအစည် အားလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြံစည် ပြုလုပ် ပြောဆို နေထိုင်ပါဟု ဆိုလိုသည်။ စာရေးသူအတွက် တန်ဘိုးဖြတ်၍ မရသော ပတ္တမြား တစ်လုံးကို ရရှိလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
၀က်လက်မြို့သည် စာရေးသူတို့၏ မြို့ဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၏ ရွာနှင့် ၀က်လက်မြို့သည် ၁ မိုင်ခွဲလောက်သာ ဝေးသည်။ ၀က်လက်မြို့ အုတ်တိုက်ကျောင်းသည် စာရေးသူ ငယ်စဉ်က ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ ကျောင်း တိုက်ဖြစ်သည်။ တိုက်ကျောင်းဆရာတော်သည်လည်း စာရေးသူ၏ ငယ်ဆရာတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာတော် သည် စာရေးသူ၏ အိန္ဒိယပညာတော်သင် ခရီးဖြစ်မြောက်အောင် ပညာသင်စရိတ် မတည်ပေး၍ အကောင် အထည်ဖေါ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ အခြားနီးစပ်ရာ ဒကာဒကာမများကိုလည်း နှိုးဆော်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဆရာတော်အား ကန်တော့တော့ ဆရာတော်က သြ၀ါဒကထာပေးတော်မူသည်။
'' ပညာရေးကို ကြိုးစားသင်ယူ၊ လူပေါင်းမမှားအောင် သတိထား ''
အလွန့်အလွန် တန်ဘိုးကြီးသော ရတနာတစ်လုံးကို စာရေးသူ ရလိုက်ပြန်ပေပြီ။ လူပေါင်းမမှား စေနဲ့တဲ့။ ဟုတ်လိုက်လေ။ ဘ၀တွင် အပေါင်းအသင်းသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ မည် လောက်ကောင်းသည်ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေ အပေါင်းအသင်း မကောင်းပါက မကောင်း သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ အပေါင်းအသင်းသည် နီးရာကူးဆက် တတ်သော မီးနှင့်တူပါသည်။ မကောင်းသော အပေါင်းအသင်းကြောင့် ဆိုးသွမ်းသော အမူအကျင့်များကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဆိုးသွမ်းသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပေါင်းအသင်းသည် ဘ၀၌ အလွန်အရေးပါလှပေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော် က အပေါင်းအသင်းကို သတိနှင့် ပေါင်းသင်းဘို့ အထူးသတိပေး တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by kaungmon at 11:32 AM0comments
Posted by kaungmon at 12:10 PM0comments
Posted by kaungmon at 5:35 AM0comments